ikhebula yetreyini lekhebula | I-china ikhebula letreyini labakhiqizi, abahlinzeki
lashukumisa perforated ikhebula ugqoko
Inezinto ezinhle kakhulu zokulwa nokugqwala, isikhathi eside sokuphila, isikhathi sokuphila isikhathi eside kakhulu kunebhuloho elijwayelekile, ukukhiqizwa kwezinga eliphakeme lezimboni, ikhwalithi nokuzinza. Ngakho-ke isetshenziswa kabanzi ezindaweni zangaphandle ezingaphansi kokugqwala komkhathi okukhulu futhi ezingalungiswa kalula.
ashisayo bacwilisa lashukumisa insimbi engagqwali aluminium wocingo ikhebula ugqoko
Itreyi lekhebula lebhasikidi liyi-welding wire mesh cable management system ekhiqizwa ngezintambo zensimbi ezinamandla amakhulu. Ugqoko webhasikidi wocingo ukhiqizwa ngokushisela kuqala inetha, ukwakha isiteshi, bese kuqeda ngemuva kokuqamba. I-2 ″ x 4 ″ mesh ivumela ukuhamba komoya okuqhubekayo ukusiza ukuvimbela ukwakheka kokushisa. Ngaphezu kwalokho, lo mklamo ovulekile oyingqayizivele uvimbela ukwakheka kothuli, ukungcola nokwanda kwamagciwane.
pre-lashukumisa ileli uhlobo ikhebula ugqoko
Isiteji sohlobo lwethreyitha lunezinzuzo zesisindo esincane, izindleko eziphansi, ukwakheka okuhlukile, ukufakwa okulula, ukushisa okuhle kokushisa nomoya permeability.Ifanelekile ukubeka izintambo ezinkulu zobubanzi ngokujwayelekile, ikakhulukazi ngokubeka izintambo zamandla kagesi aphezulu neziphansi. Ukwelashwa kuhlukaniswe ngesifutho se-electrostatic, kwalenza kwapeyintwa.Futhi indawo ingaphathwa ngokugqwala okukhethekile kokulwa nokugqwala okusindayo.